काठमाण्डौ र भक्तपुरमा फेरी थपिए नयाँ कोरोना संक्रमित, खतरा बढेपछि पुन: देशभर लकडाउन गर्ने तयारी गर्दै सरकार – Jagaran Nepal
काठमाडौं। नेपालमा कोरोनाभाइरसका ३१५ जना नयाँ सङ्क्रमितको पुष्टि भएको छ । हाल पाँच हजार ३३८ जनामा कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमण सक्रिय रहेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ । यससँगै नेपालमा कोरोना सङ्क्रमितको कुल संख्या २० हजार ८६ पुगेको छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले नियमित पत्रकार सम्मेलनको क्रममा पछिल्लो चौबीस घण्टामा छ हजार ९९३ जनाको स्वाब परीक्षण गरिएको जानकारी दिए ।
हालसम्म तीन लाख ८२ हजार ४९० जनाको स्वाब परीक्षण गरिएको उनले बताए ।पछिल्लो चौबीस घण्टामा ९३ जना कोरोना सङ्क्रमित निको भएर घर फर्केका छन् । यससँगै नेपालमा कोरोनामुक्त हुनेको संख्या १४ हजार ४९२ पुगेको छ । कोरोनामुक्त हुने दर करिब ७२ प्रतिशत पुगेको हो । हाल ११ हजार ५३३ जना क्वारेन्टिनमा छन् ।
जिल्लागत तथ्यांकअनुसार संक्रमित हुनेमा यस प्रकारका रहेका छन् ।
कैलाली ८९ / बझाङ ६८/ पर्सा ६६ / इलाम २२ / सुनसरी १ / झापा २ / सिरहा ५ / उदयपुर १ / मोरङ ३ / सप्तरी ७ / बारा १ / रौटहट १ / कञ्चनपुर ९ / काठमाडौँ ५ / काभ्रेपलाञ्चोक १ / रामेछाप २ / भक्तपुर १ / कास्की १ / रुपन्देही २ / सल्यान १
यस्तै प्रदेश नम्बर ५ मा ३ सय ८७, कर्णाली प्रदेशमा २ सय ९७ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १ हजार ६ सय ७५ जना विभिन्न अस्पतालका आइसोलेसनमा उपचाररत रहेका छन् । प्रदेश अनुसार डिस्चार्ज हुनेमा प्रदेश नम्बर १ बाट ८ सय ५६, प्रदेश नम्बर २ बाट ३ हजार १ सय ४९, बागमती प्रदेशबाट ५ सय ३२ र गण्डकी प्रदेशबाट १ हजार २ सय ५६ जना संक्रमित डिस्चार्ज भएका छन् । यस्तै प्रदेश नम्बर ५ बाट ३ हजार ९ सय ७१, कर्णाली प्रदेशबाट १ हजार ७ सय १८ र सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट ३ हजार १० जना संक्रमित निको भएर घर फर्किएका छन् ।
लकडाउन खुकुलो भएपछि कसरी बढ्दैछ सङ्क्रमण?
स्वास्थ्य मन्त्रालयले लकडाउन खुकुलो पारिएको ११ दिन अघि र ११ दिन पछिको तुलना गरेर आँकडा प्रस्तुत गर्दा यो अवधिमा सङ्क्रमण पाइने दर ०.८ प्रतिशतले बढेको देखिएको जनाएको छ। “साउन ७ देखि १७ गतेको अवधिमा ५८,१७४ पीसीआर परीक्षण गरिएको र त्यसमा २,०९२ जना सङ्क्रमित पाइएको छ। त्यो भनेको ३.८% सङ्क्रमण दर हो,” मन्त्रालयका प्रवक्ता डा जागेश्वर गौतमले बताए।
साउन ७ भन्दा ११ दिन अगाडिको अवधिमा भने ४७,८७७ पीसीआर परीक्षण गरिएको र त्यसमा १,३४५ जना सङ्क्रमित पाइएको बताइएको छ, जुन २.८% हुन आउँछ। डा गौतमले सीमानाकामा स्थलमार्गबाट नेपाल आउनेहरूको स्वाब परीक्षणको नतिजा नआउन्जेल क्वारन्टीनमै राख्न स्थानीय निकायहरूलाई अनुरोध गरेका छन्।
साथै, उनले सरकारी कर्मचारीहरूलाई पनि उचित किसिमले मास्क लगाउन र दूरी कायम गर्न अनुरोध गरेका छन्। पच्चीसजनाभन्दा धेरै सहभागी भएका गोष्ठी, बैठक वा अन्य कार्यक्रम नगर्न भन्दै अन्यथा गरिए घातक अवस्था आउने उनले चेतावनी दिएका छन्।
नेपाल ६५ औँ स्थानमा
विश्वका विभिन्न देशमा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमितहरूको आँकडा राख्दै आएको अमेरिकाको जोन्स हप्किन्स विश्वविद्यालयको तालिका अनुसार शनिवार अपरान्हसम्म धेरै सङ्क्रमित भएका मुलुकको सूचीमा नेपाल ६५ औँ स्थानमा रहेको छ।दक्षिण एसियामा सबभन्दा धेरै सङ्क्रमित भारत अनि त्यसपछि पाकिस्तान, बाङ्ग्लादेश तथा अफगानिस्तानमा पाइएका छन्।
भारतमा करिब १७ लाख सङ्क्रमित पुगेका छन् र भारत विश्वमै तेस्रो स्थानमा छ।पाकिस्तान पौने तीन लाख सङ्क्रमित सहित १३ औँ अनि बाङ्ग्लादेश दुई लाख ३७ हजार सहित १६ औँ स्थानमा छन्।माल्दिभ्स, श्रीलङ्का तथा भुटानमा चाहिँ नेपालमाभन्दा कम सङ्क्रमित पाइएका छन्।
कोरोना भाइरसको जोखिम बढ्दै गएपछि देश फेरि लकडाउनतर्फ उन्मुख भएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञ र जानकारहरुले पछिल्लो समय कोरोना भाइरस झन् खतरनाक बनेको र समुदायमा फैलन थालेको भन्दै केही समय लकडाउनको सुझाव दिएपछि सरकार गम्भीर भएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयमा समेत लकडाउनबारे छलफल भएको छ । ७ साउनबाट लकडाउन अन्त गरिएपनि फेरि कडाई गर्नुपर्ने सुझावहरु दिइएको बुझिएको छ । त्यसबारे थप छलफलका लागि मन्त्रिपरिषद्सम्म प्रस्ताव लाने तयारी बढेको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
विराटनगर महानगरपालिकामा दुई हप्ता लकडाउन घोषणा भइसकेको छ । वीरगञ्ज महानगरपालिकामा पनि कडाई गरिएको छ । काठमाडौं उपत्यकामा राति प्रवेशमा कडाई गरिएको छ । अब उपत्यकामा कोरोना संक्रमण फैलिन थालेपछि लकडाउनको तयारी भएको बुझिएको छ । उपत्यकामा दिनहुँजसो संक्रमितको संख्या बढेको छ । पछिल्लो समय कोरोना भाइरसको संक्रमण खतरनाक देखिएको छ । बितेको २४ घन्टामा चार जनाको मृत्यु भइसकेको छ । संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि जोखिम बढेको छ । यसलाई दृष्टिगत गरी सरकारमाथि रोकथामको उपाय अबलम्बन गरी लकडाउन फेरि गर्न दबाब बढेको हो ।
यसअघि आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा बोल्दै जोखिम हेरेर कोरोना रोकथामका लागि निश्चित स्थानमा निश्चित समय निर्धारण गरी लकडाउन आवश्यकता अनुसार लगाइने खुलाएका थिए । उनले भनेजस्तै सकरारले देशैभर लकडाउन नगरेपनि निश्चित स्थानमा जोखिमलाई दृष्टिगत गरी लकडाउन गर्ने नीति बनाइसकेको छ ।
लकडाउन खुलेसँगै मानिसको चहलपहल बढेपछि ह्वात्तै कोरोना संक्रमण बढेको छ । यसलाई मध्येनजर गर्दै आवश्यकता अनुसार लकडाउनको तयारी समेत गरिएको स्रोतले जनाएको छ । संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सिसिएमसी) यस अघि नै काठमाडोँ भित्रिने सवारी साधनमा कडाइ गर्न निर्देशन दिइसकेको छ। परिस्थिति अझेँ खराब हुँदै गएमा पुन लकडाउन गरिने जनाइएको छ ।
देशका विरगन्ज, पर्सा लगाएत उपत्यकामै संक्रमणको खतरा बढेको छ । कोरोना विशेष अस्पतालहरुमा बिरामीका लागि थप ठाउँ समेत उलब्ध छैन । कतिपय संक्रमित घरमै बसेर उपतार गर्न बाध्य छन् । यसले उनीहरुका परिवार सदस्यलगाएत अन्य मानिसमा जोखि पैदा गराएको छ । वीरगैजको कोरोना विषेश अस्पतालमा बिरामी नअटाउदा थप स्थानको खोजी समेत भइरहेको छ । चिकित्सकको एक टोली गएर त्यहाँको परिस्थितिबारे छलफल गरिरहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ ।